“Amantaan alagaa masaanummaa irratti tolfamtee biyya keenya dhufuun Kirrii fi Tasbii nutti hiitee du’a booda isinii tola nuun jette” -
“Amantaan alagaa masaanummaa irratti tolfamtee biyya keenya dhufuun Kirrii fi Tasbii nutti hiitee du’a booda isinii tola nuun jette”
bilisummaa June 25, 2013	Leave a comment
“Amantaan alagaa masaanummaa irratti tolfamtee biyya keenya dhufuun Kirrii fi Tasbii nutti hiitee du’a booda isinii tola nuun jette. Dhala Oromoo tokkummaa dhaloota Waaqaa qabu halagaan dugdaa fi garaa walitti nu gootee akka qalannee waliin hin nyaanne nu taassifte.
Isa Oromoon Yaa Waaq Mooraa dhiigaan nuu toil jedhee qalatee waliin nyaataa ture, harkatti busheesitee “basima abi, Bismilahi jedhaa qaladhaa afaan Waaqaatii jetteen nyaaphi Oromootaan. Akasiin Ummata Oromoo alagaan dogogora keessa naqxe.”
Previous Ibsa ejjannoo waligayii hatattamaa miseensota TBOJ
Next Oromiyaa baldhoo qoqooduuf shira wayyaaneen itti turtee fi jirtu. Nutoo gochaa diinaa kana bifa kamiin hubachaa jirra?